नेपाल–चीनबीच तीन सम्झौता
काठमाडौं । नेपाल र चीनबीच सोमवार काठमाडौंमा भएको उच्चस्तरीय वार्तामा तीन सम्झौता भएको छ । परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र चिनियाँ समकक्षी विदेशमन्त्री वाङ यीको उपस्थितिमा समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
समझदारी पत्रअनुसार चीनले मनाङमा रू. ३५ करोेडमा अस्पताल निर्माण गरिदिने, भूकम्पपीडितलाई ५ हजार थान पाल उपलब्ध गराउने र नेपाली शैक्षिक संस्थामा चिनियाँ भाषा अध्यापन गराउन चिनियाँ स्वयंसेवक सहयोग गर्ने भएको छ । समझदारीपत्र हस्ताक्षर हुनुअघि नेपाल र चीनका परराष्ट्रमन्त्रीको नेतृत्वमा द्विपक्षीय प्रतिनिधिमण्डलस्तरीय वार्ता भएको थियो ।
वार्तामा तीन वर्षअघि नेपाल र चीनबीच भएको बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई), अन्तरदेशीय विद्युत् प्रसारण लाइन, केरुङ– रसुवागढी–टोखा रेलवे परियोजनाबारे पनि छलफल भएको थियो । यद्यपि, यसबारे कुनै औपचारिक निर्णय भने नभएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । वार्तामा नेपालका तर्फबाट परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली, अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, चीनका लागि नेपाली राजदूत लीलामणि पौड्याल, सचिव शंकरदास वैरागी, अर्थसचिव राजन खनाल र परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव कालीप्रसाद पोखरेललगायत वरिष्ठ अधिकारी सहभागी थिए ।
त्यस्तै चीनका तर्फबाट विदेशमन्त्री यी नेतृत्वको टोलीमा विदेश सचिव लु झाउबी, नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत हउ यान्छी, चिनियाँ अन्तरराष्ट्रिय विकास सहायता नियोगका उपाध्यक्ष, विदेश मन्त्रालयको एशिया विभागका अधिकारीलगायत वरिष्ठ चिनियाँ अधिकारीहरू सहभागी रहेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र चिनीयाँ विदेशमन्त्री यीबीच सोमवार बालुवाटारमा शिष्टाचार भेटवार्ता भएको छ । भेटवार्तामा द्विपक्षीय हितका विविध विषयमा कुराकानी भएको प्रधानमन्त्रीको निजी सचिवालयले जानकारी दिएको छ ।
भेटका अवसरमा नेपाल–चीन सम्बन्धलाई अझ उचाइमा पु¥याउने, विगतको चीन भ्रमणको बेला भएका सहमति कार्यन्वयन गर्नेलगायत विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्री ओलीका परराष्ट्र सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले जानकारी दिए ।
चीनका विदेशमन्त्री यी तीनदिने औपचारिक भ्रमणका क्रममा आइतवार काठमाडौं आइपुगेका हुन् ।
पञ्चवर्षीय योजनाका मस्यौदा वस्तुनिष्ठ बनाउन सुझाव[२०७६ माघ, १२]
स्वामित्व मिल्ने बैंकहरूलाई मर्ज हुन अर्थमन्त्रीको सुझाव [२०७६ माघ, १२]
वितरकलाई बिचौलिया नभन्न आग्रह [२०७६ माघ, १२]
‘आन्तरिक र बाह्य लागानीको फ्युजन आवश्यक’[२०७६ माघ, १२]
देउराली लघुवित्तको सेवा शुरु, समृद्धिका लागि सुरक्षित लगानी हुनुपर्छ : गभर्नर नेपाल[२०७६ माघ, ११]
एशियाभर मास्क र ह्यान्ड स्यानीटाइजरको अभाव चुलियो [२०७६ माघ, ११]
‘साना, मझौला र ठूला उद्यमी व्यावसायीहरु समृद्ध नभएसम्म देश समृद्ध हुन सक्दैन’ [२०७६ माघ, ११]
जनप्रतिनिधिले नै घूस लिएपछि..... [२०७६ माघ, ११]
सबल र समृद्ध बैंकिङका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिनै पर्छ : अर्थमन्त्री खतिवडा[२०७६ माघ, ११]
पञ्चवर्षीय योजनाका मस्यौदा वस्तुनिष्ठ बनाउन सुझाव
३ महीनादेखि बजारमा आईपीओ आउन सकेन
स्वामित्व मिल्ने बैंकहरूलाई मर्ज हुन अर्थमन्त्रीको सुझाव
प्रदेश २ मा सौर्य ऊर्जा उत्पादन : कानून र जग्गा अभावमा काम अगाडि बढेन